रियल सेक्स डॉल Lifelike बिक्रीको लागि सस्तो खरीद गर्नुहोस् उत्तम रियलिस्टिक सेक्सी डॉलहरू
सस्तो मूल्यमा बेच्नुहोस्
00 दिन 00 : 00 : 00
२२% बचत भयो
मिया + अतिरिक्त हेड + जिब्रो + जेली स्तन + औंला कंकाल - डी कप सानो कम्मर सस्तो सेक्स गुडिया
Anais - 165cm F-कप युरोपेली शैली ब्राउन स्किन TPE सेक्स डल
$ 1,329.00 $ 1,586.99
Elle - 158CM ठूलो स्तन युरोपेली प्रेम शैली गहुँको रंगको छाला TPE सेक्स डल
$ 1,300.00 $ 1,586.48
169 सेमी ब्रिन्ले + सेक्सी अधोवस्त्र + हस्तमैथुन + धुने + ठूलो स्तन सस्तो TPE सेक्स डल
$ 1,306.00 $ 1,563.52
अन्नाबेले ठूलो स्तन सेक्स डल TPE पुतली
१४० सेमी Harlow + सेक्सी कपडा + हस्तमैथुन + वाशर + डी कप प्रेम गुड़िया
१४० सेमी Gracelyn + हस्तमैथुन + सेक्सी अंडरवियर + वाशर + डी कप बिक्री को लागी उत्तम यथार्थवादी सस्तो सेक्स पुतली
१४० सेमी गैब्रिएला + हस्तमैथुन + धुने + सेक्सी underwaist + डी कप पातलो कमर प्रेम WM गुड़िया
१५157 सेमी सिमोना + वाशर + हस्तमैथुन + सेक्सी अधोवस्त्र + बी कप स्तन TPE सस्तो सेक्स पुतली
अल्फ्रेड Wm पुतली १162२ ई कप टाउको ट्यान छाला सस्तो TPE सेक्स पुतली
१४148 सेमी Jingjing + धुने + हस्तमैथुन + सेक्सी कपडा + ई-कप ठूलो स्तन जापानी केटी सस्तो TPE प्रेम पुतली
तातो बिक्री वास्तविक जीवन सेक्स गुड़िया
148CM ठूला स्तन ब्राउन छाला TPE सेक्स गुड़िया
लाइफ साइज गोलो अनुहार जापानी केटी TPE सेक्स डल
सर्वाधिक खरीद गरिएको १148 सीएम सेक्सी सेक्सी बिग ब्रेस्टेड लाइफ साइज रियलिस्टिक सेक्स डल
159CM बिग बुटी सेक्सी ब्यूटी BBW TPE सेक्स डल
$ 1,309.00 $ 1,584.99
१५ C सेमी चंचल लूट मोहक ठूलो आँखा TPE सेक्स गुड़िया
१५५ सेमी सानो Cheasts सुरुचिपूर्ण विदेशी भाषा शिक्षक TPE सेक्स गुड़िया
सर्वश्रेष्ठ बेच्ने रियल सेक्स डॉलहरू
Aaliyah-140cm डी कप पातलो कमर कर्ल TPE WM पुतली
Evelynn - १166 सेन्टिमिटर सी कप सेक्सी तंग स्विमसूट पातलो कमर
Emerson-157cm बी कप मिनी स्तन ट्यान छाला TPE WM गुड़ियाहरु
Millie - १५156 सेमी पतली सेक्सी सौन्दर्य TPE WM गुड़ियाहरु
Yaretzi - १४१ सेमी लूट ठूलो स्तनहरु सस्तो AXB सेक्स पुतली माया
Alana - १164४cm डी कप ट्यान छाला WM सस्तो Tpe सेक्स पुतली
शार्लोट - १164४ सेमी J कप विशाल स्तन सस्तो TPE WM गुड़िया
$ 1,679.99$ 2,799.99
पाइपर - १157 सेमि बी-कप ठूला आँखाहरूले तपाईंलाई भित्तामा डब्ल्यूएम गुडियाले चुम्बन गर्छ
अमारी - १172२ सेमी बी कप सेक्सी अधोवस्त्र पातलो कमर TPE WM गुड़िया माया
ब्लेयर - १172२ सेमी डी कप ठूलो स्तन सस्तो WM पुतली
जोसेफिन - १172२ सेमी बी कप ट्यान छाला Wm Tpe गुड़िया
अलेक्जान्ड्रिया - डी कप १४० सेमी पतली ट्यान छाला सस्तो TPE सेक्स डल
$ 1,253.15$ 3,411.99
Loraer - 155CM सानो छाती यथार्थवादी रियल पुसी TPE सेक्स डल
Ava - १४२ सेमी सेक्सी पतली WM TPE सेक्स गुड़िया
Mariah - १172२ सेमी डी कप पिकनिक सन बाथ टैन छाला WM गुड़िया
अरोरा - १162२ सीएम एफ कप कप WM ट्यान छाला TPE सेक्स गुड़िया
सटन - 140cm डी कप पातलो कमर WM गुड़िया माया
नोरा - १161१ सेमी ठूलो स्तन घुंघराली कपाल TPE सेक्स पुतली
Kaia - १173३CM बटहरु ठूलो स्तन गोरा छोटो कपाल
म्याकेन्जी - १५156 सेमी बी कप बिग गधा वयस्क WM गुड़िया
Hilary - १156CM सानो शैतान उत्तम अनुहार WM सेक्स डल
मालिया - १173३ सेमी सुन्दर विशाल स्तन प्रेम WM गुड़िया
मोर्टन - १c सेमी विशाल स्तन Busty केटी पतली शरीर TPE सेक्स गुड़िया
Loraer - १५५ सेमी सानो छाती यथार्थवादी मेकअप असली बिल्ली सस्तो सेक्स गुड़िया
Julianna - १163३cm एच कप ठूलो स्तन वयस्क सस्तो सेक्स गुडिया
Charlee - १161१ सेमी ठूलो स्तन पातलो कमर TPE पुतली
अमिना - १172२ सेमी बी कप देवी पातलो कमर WM पुतली
JoJo - मोटापा सौन्दर्य सहयोगी विशाल गधा सस्तो सेक्स गुड़िया Irontech गुड़िया
भ्यालेन्टाईन - १C० सीएम गुलाब देवी ब्राउन छाला TPE सेक्स डल
टोरसो हस्तमैथुन प्रेम गुड़िया
सियाओउ - पूरा लोभ लोलिता प्रेम गुड़िया टोरसो वयस्क पुरुष खेलौना
उत्तम अपरेशन सेक्स डोल टोरसो मासूम स्कूल छात्रा जियाओमी
प्यारा नौकर केटी माया ब्रेस्ट सेक्स प्रेम गुड़िया सुन्दर टोरसो
थ्रीडी वयस्क खेलौना ठोस आधा टोरसो महिला लेग्स २ होल सेक्स डल
पूर्ण भर्नुहोस् सेक्सी काल्पनिक लार्किन प्रेम गुड़िया सुन्दर खुट्टा
यूरोपीयन मोडल साल्सा बटन मोडल वास्तविक इन्भर्टेड डाई सेक्स डल गधा २ छेद
कोरियाली एch्कर कै बिन वास्तविक शरीर उल्टिएको हिप बटन सेक्स डल गधा
सबैभन्दा राम्रो जीवन आकार सेक्स पुतल के हो?
के तपाईंको आफ्नै छ? वास्तविक पुतली बकवास? अब, ती उत्तरी अमेरिकामा एक नयाँ प्रवृत्ति हो। पुतलीको बारेमा कुरा गर्दै, हुनसक्छ तपाईले पहिला inflatable गुड़ाहरूको बारेमा सोच्नुहुनेछ। तर त्यो विगत काल हो। सब भन्दा आदिम पुतलीहरू १teen औं शताब्दीका डच नाविकहरूले आविष्कार गरेका थिए जुन लामो दूरीको यात्राको क्रममा समुन्द्रद्वारा पृथक थिए। तिनीहरूले पत्ता लगाए कि यसले केहि तरिकामा तिनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। सिलेका कपडाहरू वा पुरानो कपडाहरूबाट बनाइएका, यी हस्तमैथुन गुडाहरू आजका सेक्स डल्सको प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती हुन्। अवश्य पनि, टेक्नोलोजीको अग्रिमताका साथ तिनीहरू वास्तविक व्यक्तिहरूसँग नजिक हुँदै जान्छन्। हालका वर्षहरूमा, urdolls को नेतृत्वमा निर्माणकर्ताहरूको समूहले प्रत्यक्ष कार्यमा नवीनतम पुतलीहरू उत्पादन गरेको छ। वर्तमानमा, पुतली उत्तर अमेरिका र युरोपमा धेरै लोकप्रिय छ।
तपाईंको आफ्नै पुतल किन्नु अघि। तपाईलाई नयाँ सेक्सट गुड़ाहरूको बारेमा केही जानकारी थाहा पाउनु पर्छ। हाम्रो वेबसाइटमा लगभग सबै प्रकारका वास्तविक पुतलीहरू छन्। एशियाई पुतली उनीहरूको पेटीट फिगर वा ती निर्दोष मुस्कानहरूको कारणले हुन सक्छन् जुन तातो रगतको मान्छेलाई मायाको लागि लामो बनाउँदछ। वा हुनसक्छ तपाईं एक आकर्षक र विदेशीको साथ हुन चाहानुहुन्छ जापानी सेक्स गुड़िया। यो तपाइँको किशोर किशोरीहरूमा anime को कल्पना पनि हुन सक्छ। यहाँ हामी पुत्राको इतिहास, बजारमा वर्तमान विकल्पहरू र पुतली छनौट गर्दा बिभिन्न विकल्पहरूको बारेमा सिक्नेछौं।
२०१२ देखि, बजारमा inflatable यौन गुड़िया बिस्तारै TPE पुत्रा र सिलिकॉन गुडिया द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ। थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स विकल्प TPE भनिन्छ सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी किनभने यथार्थवादी यौन पुतली निर्माताहरु द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता भन्दा राम्रो हो। महँगो प्लेटिनम क्य्यर्ड सिलिकॉनबाट बनेका खेलौनाहरू बनाउन सस्तो छ। केही आधुनिक पुतली निर्माताहरूले उनीहरूको सिलिकॉन पुत्रामा आन्तरिक हीटिंग सिस्टम थपेका छन्।
TPE पुत्रा र सिलिकॉन गुड़ाहरू प्रत्येकको आफ्नै फाइदाहरू छन्। TPE सामग्रीहरू सस्ता छन्। TPE सामग्रीले बनेको वास्तविक केटीको सेक्स पुत्रीको मूल्य सिलिकॉन गुडियाको मूल्य भन्दा कम छ। लोच र नरम पनि राम्रो छ। सिलिकॉन सामग्रीहरू अधिक महँगो छन्, तर सिलिकॉन गुड़ियाहरू अधिक टिकाऊ र वास्तविकतासँग धेरै नजिक छन्। सिलिकॉन पुतलीहरू मूलत: टिन-क्युरेटेड सिलिकॉनबाट बनेका थिए, तर प्लेटिनम टेक्नोलोजीको सेवा जीवन लामो छ र फाल्ने र इन्डेन्टेशन हुने खतरा कम छ।
मानव सेक्सी वास्तविक यौन गुड़िया प्रेमीहरूले जापानमा such० वेश्यालय छनौट गर्न र मार्च २०१ Europe मा युरोपमा पहिलो वेश्यालय छनौट गर्न सक्दछन्। प्रबन्धनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पुतलीहरू आदर्श कर्मचारी हुन्, तिनीहरू सँधै यहाँ छन् किनकि तिनीहरू कहिल्यै बिरामी हुँदैनन्, तिनीहरू सँधै राम्रो देखिन्छन्, ती सबै तीन प्वालहरू, कुनै गुनासो वा अतिरिक्त शुल्कहरू प्रदान गर्दछन्। केहि कम्पनीहरूले समान टेक्नोलोजीको प्रयोग प्लग रेश पुत्रा बनाउन बनाउँदछन्। युवा पुस्ताले इन्टरनेटको व्यापक सांस्कृतिक प्रयोगको साथ, त्यहाँ एमेच्यर्सहरूका लागि धेरै फोरमहरू छन् जसले कपडा वा अन्य सामग्रीहरू आफ्नै बनाउन प्रयोग गर्दछन्। सस्तो यौन पुतली.
समाजको निरन्तर विकासको साथ, मानव जीवनको उत्तम आनन्द लिने तरिकाहरू खोज्दै छ। मनोरन्जनको तरिका पनि अधिक र अधिक प्रशस्त भएको छ। शीर्ष गुणस्तरको सेक्स डल्स मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठूलो आविष्कार हो। पूर्ण आकार, रिच सिंथेटिक सिर्जनाहरू, जसको मुख्य कार्य भनेको व्यक्तिहरूको यौन आवेगहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु हो। समलिose्गीहरूका आफ्नै अधिकारहरू भएजस्तै आज पुतलीहरू किन्नु र प्रयोग गर्नु पनि सामान्य हुँदै गइरहेको छ। अरूहरू तपाईसँग मित्रैलो हुनुहुने छैन किनकी तपाई लैंगिक गुडिया प्रयोग गर्नुहुन्छ। के तपाईले थाहा पाउनु पर्छ कि यो तपाईको विशेषाधिकार हो।
अधिक र अधिक व्यक्तिहरूका लागि। तिनीहरू वास्तविक महिला जस्तै देखिन्छन्। तपाईं आफ्नो हार्दिक सपनाहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ - हाम्रो सबैभन्दा उत्तम यथार्थपरक सेक्स पुत्रीको साथ, तपाईं आफैंलाई खुशीको क्षणहरू दिन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू एक वास्तविक महिला जस्तै देखिन्छन् र एक वास्तविक महिला जस्तै महसुस गर्छन्। पूर्ण आकारको सेक्स गुड़िया अब यति जीवन्त छ। यसको मानव कपाल, नरम छाला, भावनात्मक अनुहारका सुविधाहरू र मोहक वक्रका साथ, यो पहिलो नजरमा वास्तविक महिलाबाट लगभग भिन्न देखिन्छ। यथार्थपरक जीवन आकारको सेक्स गुड़ियाहरू होशियारीका साथ क्राफ्ट गरिएको र वास्तविक व्यक्तिहरूको नमूनाको रूपमा।
यदि तपाईं पुरुषहरूका लागि वास्तविक यौन पुतलहरू खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई हेर्न रोक्नुहोस् किनकि तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। साना र कोमल पुतली देखि ठूला र विस्तृत यथार्थपरक सेक्स खेलौना पुत्रा विस्तृत: हाम्रो दायरामा सबै प्रकारका स्वादहरू छन्! सबैले आफ्नो मनपर्ने पुतली पाउन सक्छन्, त्यहाँ धेरै अलग मोडेलहरू छन्, तिनीहरू सामग्री, उपकरण र उपस्थितिमा फरक छन्। सेक्सन पुत्राको साथ, तपाईं फरक स्थितिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ, यसलाई एक प्रकारको प्रशिक्षणको रूपमा लिइन्छ।
बिक्रीमा नयाँ आगमन सेक्स डल्स
Scarlett 164CM G-Cup Irontech Head Big Breasts TPE Sex Doll
Mila 164CM G-Cup Irontech Head Big Breasts TPE Sex Doll
Avery 164CM G-Cup Irontech हेड लाइट स्किन TPE सेक्स डल
Emily 158CM I-Cup Irontech Head Nature Skin TPE सेक्स डल
सोफिया 164CM ई-कप आइरनटेक हेड सेक्सी ब्यूटी TPE सेक्स डल
Camila 152CM A-Cup Irontech हेड पातलो कम्मर TPE सेक्स डल
$ 2,403.49$ 2,403.49
हार्पर 162CM I-Cup Irontech हेड मोजा TPE सेक्स डल
Evelyn 162CM I-Cup Irontech Head Booty TPE Sex Doll
$ 1,253.00$ 1,966.74
Isabella 169 CM L-Cup WM हेड सुन्दर स्तन TPE सेक्स डल
$ 1,953.79$ 1,953.79
सुन्दर यौन गुड़िया विशेष श्रृंखला
जेसिका - Dollhouse १168 E कप ईवो संस्करण १C० CM सेक्स डॉल
जेसिकाले कपालको मर्मतसम्भारमा ठूलो ध्यान दिन्छ। घरको बाथरूममा विशेष उच्च-ग्रेड कन्डिसनर र शैम्पू हुन्छ, र प्राय: ब्यूटी सैलुनमा जान्छ। मूल रूपमा, कपाल को शैली मासिक आधार मा अक्सर परिवर्तन गरिएको थियो। समान कपाल स्टाइल तीन महिनासम्म रहनेछैन, तर यो सधैं एक निश्चित समयमा लामो कपाल थियो। यदि तपाइँ एक सुपर इलेक्ट्रिक झटका काम चाहानुहुन्छ, तब उनीसँग पनि यो छ। उनी गर्वका साथ तपाईंको कडा भाँडा सवारी र चूसना हुनेछ। मसँग बान्ता रिफ्लेक्स छैन। मुंडा योनी देखि भव्य गधा, तपाईं केहि पोज लिन सक्नुहुन्छ तपाईं लिन सक्नुहुन्छ। उनी जान्छिन् कि उनी एक पुरुष र शयन कक्षको वरिपरि कसरी छिन्। उनलाई मनमोहक चीजहरू मनपर्दछ, र उनी प्राय: प्रिन्स मोहकको उपस्थितिको प्रतीक्षामा छिन्। उनी धेरै रोमान्टिक प्रेमको प्रतीक्षामा छिन्। सानी केटीको स्वभाव धेरै प्यारा छ। उनको व्यक्तित्व हंसमुख छ, तर उनको उदास व्यक्तित्व अझै छ। र मानिसहरू लापरवाह छन् र अक्सर गलत काम गर्छन्। उनी एक धेरै यथार्थपरक यौन पुतली हुन् जुन टाउको र शरीरको साथ हटाउन योग्य छैन।
Rin - Dollhouse 168 सेक्सी चिनियाँ ब्यूटी बिग ब्रेस्ट्स TPE सेक्स डॉल
Rin एक चिनियाँ हो। उनीसँग मनमोहक एफ-कप ठूलो स्तनहरू छन्। धेरै व्यक्तिले मद्दत गर्न सक्दैन तर यसलाई चाट्न चाहान्छन्। उनी छिटो, निष्पक्ष, केहि अलि धेरै चिसो पनि छिन। यो उनको वरिपरि साथीहरु को लागी धेरै सामान्य छ। उनी राजधानीको एउटा साधारण परिवारमा जन्मेकी थिइन्। उनी सँधै धेरै स्वतन्त्र केटी भइन्। उनी १ 15 वर्ष नपुगुञ्जेल उनी घरबाट बाहिर गइन्। जीवनको लागि खोजी गर्न सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईं चाहानुहुन्छ। उनी बाहिर निस्केपछि उनले धेरै अवरोधहरू सामना गर्नुपर्‍यो। तर उनले कहिल्यै हार मानिनन्। उनको बुद्धि र उत्साह संग, केहि पनि उनको पूर्ण क्षमतामा पुग्न रोक्न सक्दैन। उनी छिट्टै हिसाबले लिने एउटा शक्ति बन्नेछिन्।
एथेना - सी कप सानो कम्मर छोटो कपाल १165 सेमी पूर्ण आकारको सेक्स डल
एथेना जर्मनीकी हो। उनी एक आकर्षक शरीरको साथ पूर्ण आकारको पुतली हो। उसको कम्मर सानो छ, उनको स्तन र नितम्बहरु लाई अझ अचम्मको लागी बनाउँदछ। एन्जिलिक अनुहार, सहानुभूतिपूर्ण आँखा, हेर्नुहोस् आफ्नो आँखा उनको नरम ओठ, सेक्सी घाँटी र खुला हड्डी देखि उनको अग्लो गाल हड्डी र प्यारा नाक ड्रप गर्न दिनुहोस्। गोप्य रूपमा कुरा गर्दा, उनको सपना सबै कुराबाट वञ्चित छ। उनलाई केवल उसको हेरचाह गर्न र उनलाई लगभग असन्तुष्ट यौन आवश्यकताहरू पूरा गर्न बलियो मान्छे चाहिन्छ। उनीसँग आकर्षक शरीर रहेको छ जसले उसलाई घर वरिपरि लैजान्छ किनभने तपाईं सबै कोणबाट आकर्षक आकर्षणको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरको सबैभन्दा व्यक्तिगत अनुभव खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि वास्तविक पुतली तपाईंको उत्तम छनोट हो। लचिलो संयुक्त स्टील फ्रेम ढाक्छ र स्पर्श TPE सबै भन्दा राम्रो परिणाम प्रदान गर्दछ।
GYNOID १cm० सेमी सेक्सी सेक्स गुडिया
हामीबाट किन खरीद गर्ने?
हामी ग्राहकहरूलाई सहज समाधान सेवा प्रदान गर्दछौं ग्राहकहरूलाई उनीहरूको आफ्नै सन्तोषजनक पुतना फेला पार्न मद्दत गर्न। जब तपाईंसँग सेक्स पुत्राको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन्, हामी तपाईंलाई पहिलो पटक उत्तर दिनेछौं। पुतली वास्तविक यौन भन्दा सुरक्षित छन्, तपाईं गर्भावस्था वा यौन रोग बाट चिन्ता लिनु हुँदैन!
URDOLLS अति-यथार्थवादी पुतलीहरू बनाउन प्रतिबद्ध छ। सबै पुतलीहरू वास्तविक व्यक्तिहरूको अनुसार बनाइन्छन्। हाम्रो मूर्तिकारहरूको ing० बर्षको मोडेलिंग अनुभव छ। प्रत्येक पुतलीको अनुहार र बनावट छालाको प्रत्येक ईन्च मास्टर द्वारा कुँदेका छन्। सिमुलेशन डिग्री 30%% वा सो भन्दा बढि छ। यसबाहेक, यो एक धेरै यथार्थवादी र आत्मीय अंग छ जसको वास्तविक उत्पादनको बनावट समानता similar 98% वा अधिक हो, जसले वास्तविक व्यक्तिको जस्तो भएको महसुस गर्छ। हामी तपाईंलाई उत्तम सेवा र सबै भन्दा राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न निश्चित गर्दछौं।
हामी प्रत्येक चाडमा भण्डार घटनाहरू राख्नेछौं। प्रयोगकर्ताहरूलाई उदार प्रस्तावहरू ल्याउँदै। जब हामी पदोन्नति राख्छौं, तपाईं कुपन कोड खरीद गर्न खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। गतिविधि प्रस्ताव प्राप्त गर्नुहोस्। यदि तिमी यौन पुतलाहरू किन्नुहोस् घटनाको समयमा यसले सामान्यतया तपाईलाई धेरै पैसा बचत गर्दछ।
हामीसँग उन्नत र अद्वितीय उत्पादन टेक्नोलोजी छ, र कुशल मूर्तिकारहरू, ईन्जिनियरहरू र पेशेवरहरू मिलेर बनेको श्रृंगार कलाकारहरूको एक मजबूत टीम। प्रत्येक निर्माण प्रक्रियामा, हामीसँग पूर्णताका लागि प्रयत्न गर्न धेरै सख्त आवश्यकताहरू र गुण नियन्त्रण हुन्छ। तपाइँलाई शरीरको विभिन्न भागहरूको लागि यो अत्याधुनिक गुडियालाई अनुकूलन गर्न अनुमति दिँदै - यसले तपाईंको सपनाको केटीको छवि फिट गर्दछ।
हाम्रो पुतली राम्रो देखिन्छ, अझ वास्तविक लाग्छ, र लामो समय सम्म! यो सजिलो छ। Urdolls को प्रत्येक पुतली एक धेरै विस्तृत यौन क्षेत्र छ। तिनीहरूको छाला अधिक लोचदार हुन्छ। उदाहरणको लागि, स्तन खुशीसाथ हल्लाउँदै छ। TPE / सिलिकॉन सँग उच्च टिकाऊपन छ र गुड़ियाको जीवन अधिकतम गर्दछ।
हाम्रो पुतली TPE वा सिलिकॉन सामग्रीले बनेको छ। नयाँ पिढी स्टेनलेस स्टील उच्च परिशुद्धता डबल रोटर गियर को अनन्य डिजाइन मानव शरीर संयुक्त कंकाल जस्तै हो। यसले विभिन्न आकारहरू र आन्दोलनहरू वास्तविक व्यक्तिको जस्तै बनाउन सक्दछ, टिकाऊ, सजीलो गर्न सजिलो छैन र छाडा हो। उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान टेक्नोलोजी र उत्तम शिल्प कौशल उच्च गुणवत्ता गुड़िया उत्पादन गर्न। ग्राहकको अनुभवलाई राम्रोसँग बढाउनुहोस्।
हाम्रो स्टोरमा सबै पुतलीहरू वास्तविक व्यक्तिको अनुपातको आधारमा बनेका छन्। तिनीहरू निश्चित रूपमा मानव शरीरको आकार हुन्। तपाईं यसबाट अचम्मित हुनुहुनेछैन, तपाईं सोच्नुहुनेछ कि ती जीवित व्यक्ति हुन्। तपाईंसँग हाम्रो गुणवत्ता आश्वासन छ।
हाम्रो पुतली भित्र धातु कंकाल हुन्छ। तिनीहरू पोज र लगाउन सजिलो छ, यद्यपि तिनीहरूको नरम छाला अत्यधिक तनावमा अतिसंवेदनशील छ। तिनीहरूका क्यालिबरहरू अन्य पुतलीहरू भन्दा लामो समय बाँच्दछन्। किन तिनीहरू धेरै मान्छे जित्छन्। नरम र सस्तो। नरम र लम्बाई भएको छ, तपाईं पाउनुहुनेछ कि पुतलीको छाती र हिप्स सजिलै स्विing्ग हुन्छन् जब उनी पछि स्ट्रोक स्ट्रोक गर्दछन्।
जब तपाईंको पुतलीलाई अनुकूलन गर्दै। तपाईं हामीलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जब पुतली पठाइन्छ, हामी तपाईंलाई ट्र्याकिंग नम्बर पठाउनेछौं, र हामी शिपेन्टलाई छिटो बनाउन र सुरक्षित डेलिभरी सुनिश्चित गर्न फेडरक्स र डीएचएल प्रयोग गर्दछौं। हामी तपाईंको गोपनीयतालाई पनि गम्भीर रूपमा लिन्छौं, त्यसैले बक्समा कुनै लेबलहरू हुनेछैन, चाहे हाम्रो कम्पनीको नाम देखा पर्दैन। पुतली निर्माण प्रक्रिया पूरा हुन complete देखि days दिन लाग्छ। त्यसोभए तपाईंको पुतली गन्तव्यमा पुग्नेछ 3-२० दिनमा विश्वको सब भन्दा द्रुत विनिर्माण र शिपिंग विधिबाट।
हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई बिभिन्न निःशुल्क विकल्पहरु प्रदान गर्दछौं, ताकि तपाईले आफ्नो शैली मन पराउनु होस् स्वतन्त्र रूपमा। वेबसाइटमा विभिन्न पुतल कोटीहरूमा आधारित तपाईं कल्पना गर्नुहुने उत्तम प्रेमी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। अनुकूलन पुतली विकल्पहरू।
हाम्रो सबै पुतलीहरू तपाइँको प्राथमिकता अनुसार छनौट गर्न सकिन्छ (उचाई, कपाल, छालाको रंग, आँखा र धेरै अन्य आईटमहरू सहित)। तपाईंको आफ्नै बाहुली डिजाइन गर्नुहोस्। यदि तपाईं सन्तोषजनक शैली फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, कृपया हामीलाई ईमेल वा फोनबाट सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई सन्तोषजनक उत्तर दिनेछौं।
हाम्रो ब्याकएन्ड प्रणालीहरू सुरक्षित छन् र हामी तपाईंको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न Paypal प्रयोग गर्छौं। तपाईंको बिलमा त्यहाँ केहि छैन जुन तपाईंको खरीदको प्रकृतिलाई प्रकट गर्दछ।
हाम्रो स्टोरमा सबै यौन गुड़िया नि: शुल्क शिपिंग हुन्। र संसारको हरेक देशमा पठाउन सकिन्छ। वेबसाइटमा तपाईले देख्नु भएको मूल्य तपाईको पुतलीको स्वामित्व चाहिने कुल मूल्य हो। हामी तपाईंलाई थप शुल्कहरू लिने छैनौं। पुतलीहरू ढुवानी गर्न आवश्यक ढुवानी लागतहरू सबै हामी सहन्छन्।
यौन पुतली हाम्रो बीचमा एक महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएको छ, र ती वास्तवमा एक आपसी सम्बन्ध र यौन जीवनमा समग्र खुशी बृद्धि गर्न सबै भन्दा प्रभावकारी र सन्तोषजनक तरिका हो। समाजको विकासको साथ, मानिस बिस्तारै पुतलीका धेरै अन्य प्रयोगहरू पत्ता लगाउन थाले। तिनीहरू बालबालिकाको यौन शिक्षामा बढि प्रयोग गरिन्छ। गुडाहरू शरीर कला मोडेलहरू र चिकित्सा शिक्षणमा पुतलाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुन्दर महिला अक्सर फेसन उद्योग मा mannequins को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। अवश्य पनि, अधिक व्यक्ति फोटोग्राफर र संग्रहको लागि पुतली प्रयोग गर्छन्। धेरै पुतलीहरू वास्तविक यौन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
तपाई कुन आधिकारिक हुनुहुन्छ र तपाईको सिट लिनु पर्छ। तपाईलाई कस्ता प्रकारको मद्दत चाहिन्छ, यौन जीवन र यौन सम्बन्ध आवश्यकताहरू पर्दैन, पुतलीले तपाईलाई धेरै तरिकाले मद्दत गर्दछ। हाम्रो विश्व-स्तरीय चयनहरू मार्फत ब्राउजिंगको आनन्द लिनुहोस्, हामीसँग विभिन्न छाला टोन, कपाल र जातीयताका पुतलीहरू छन्। भविष्यमा, हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ यथार्थपरक सेक्सन पुतली देख्नेछौं, जुन उनीहरूलाई थप मानवीय भावनाहरू ल्याउने आशा गरिन्छ। हुनसक्छ भविष्यमा सबैको घरमा एउटा स्मार्ट पुतली हुनेछ।
सुझावहरू र दिशानिर्देशहरू
हामी तपाईलाई यथोचित मूल्य, विस्तृत, उच्च गुणस्तरको सिलिकॉन वा TPE गुड़िया ल्याउन धेरै खुसी छौं। तपाईंको आफ्नै सेक्सन गुडियामा ठूलो निर्णय गरे पछि, तपाईंलाई पुतलीको बारेमा केहि जान्नु आवश्यक छ र उत्तम पुतली प्राप्त गर्नका लागि केहि सुझावहरू र दिशानिर्देशहरू। हामी तपाईंको खुशीको ख्याल राख्छौं। हाम्रो उत्पादनहरू आज बजारमा सबैभन्दा नवीन र सस्तो उच्च गुणवत्ताको यथार्थपरक पुतलीहरू हुन्, र तिनीहरूको मूल्यहरू हामीले उत्तम मूल्यमा उत्पादन गर्ने गुणवत्ता र विवरणको स्तरमा पुगेका छन्। हामी लगातार पुतलीको वास्तविक भावना सुधार गर्न र उत्कृष्ट पुतलीहरूको लागि प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी नक्कली र उच्च अधिभारहरूको विरोध गर्दछौं।
सब भन्दा कम लागतका सेक्स पुत्राहरू फुलाउने योग्य हुन्छन् र हावा प्रयोग गर्न सक्दछन्। उचित मूल्यको कारण, धेरै ग्राहकहरू यसको बेफाइदा बेवास्ता गर्न इच्छुक छन्। तर प्रयोगको थोरै मात्रा पछि, तिनीहरू अक्सर सिममा क्र्याक गर्छन्। बजार मूल्य दायराको मध्यमा, पुत्राहरू गाढा विनाइल वा भारी ल्याटेक्सले बनेको हुन्छ। सब भन्दा महँगो पुतली प्राय: सिलिकॉन वा थर्माप्लास्टिक इलास्टोमेरबाट बनेका हुन्छन्। सिलिकॉन सामग्रीले बनेको गुडाहरू धेरै यथार्थपरक हुन सक्छ। GYNOID Doll ब्रान्डको गुडिया जस्तै, यो वास्तविक मानवको रूपमा देखिन्छ, व्यावहारिक छाला बनावट हुन्छ (चलचित्र विशेष प्रभावको लागि प्रयोग गरिएको छाला जस्तै), र सामान्य (वा वास्तविक) कपालको नजिक हुन्छ।
टिकाऊ पुतली छान्नुहोस्
मेरो विचारमा, जीवन एक उतार चढाव हो। ट्रफको क्षति अनुभव गरे पछि मात्र मलाई क्लाइम्याक्समा चढाईको थ्रलको बारेमा बढी थाहा छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको एक अनुकूलन योग्य पुतलै हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पुतलीको कपाल, छाला, आँखा, ओठ र अन्य सुविधाहरू ध्यानपूर्वक व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ र सम्भव भएसम्म महसुस गर्नुहोस्। तपाईं वास्तविक संभोग को भावना लाई तृष्णा गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो चिच्याई जसले तपाईंलाई सन्तुष्ट महसुस गराउँछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सेक्सन गुड़िया उच्च-गुणवत्ता सामग्रीबाट बनेको छ। चाहे उनी TPE वा सिलिकॉन हो।
बाटोमा, हुनसक्छ तपाईं असहाय र दयालु हुनुहुनेछ, र त्यहाँ आँसु र रोइनेछ। तर त्यहाँ सँधै यस्ता पलहरू हुन्छन्, पुतलीले तपाईंलाई अद्भुत भावनाहरू ल्याउँदछ र साधारण जीवनलाई फरक धड्कन दिन्छ। तपाईंले छनौट गर्ने बेलामा तपाईंको फ्याटिजमको बारेमा पनि सोच्न आवश्यक छ। तपाईंलाई कस्तो किसिमको पुतली मन पर्छ। गोरा? ठूलो छाती? ठूलो गधा? सबैको स्वाद फरक छ। हामीले प्रदान गर्ने छनौटहरू हाम्रा ग्राहकहरूका लागि सही छन्। अन्तमा तपाईं मूल्य सीमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भित्री शान्ति र यौन सन्तुष्टिलाई सँधै राख्नका लागि यो आफैंमा बढी पैसा जोड्नु सधैं राम्रो उपाय हो। हामी तपाईंलाई अधिक तिर्ने छैनौं। तपाईलाई सकेसम्म सेक्सको आनन्द लिने तरिकाहरू, तर मूल्यले तपाईको पैसा नष्ट गर्दैन। वास्तवमा, पुतलीले तपाईको विवाह वा मानसिक स्वास्थ्य बचाउन मद्दत गर्दछ।
यी पुतलीहरू पोज र लगाउन सजिलो हुन्छ, यद्यपि तिनीहरूको नरम छाला अत्यधिक तनावमा अतिसंवेदनशील हुन्छ। छाला पनि सजीलो रyes्गको साथ दाग हुन्छ, त्यसैले यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं केवल आफ्नो पुतली सेतो लुगा। पुतलीले सबै क्षमताका मानिसहरूलाई, सामान्य सम्बन्धमा कडा यौन इच्छा पूरा गर्न असमर्थ व्यक्ति, यौन रोगबाट डराउने वा डराउने व्यक्ति, यौन रोगका साथ साझेदारहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्न चाहने व्यक्ति, र उनीहरूको यौन जीवनमा परिवर्तन पाउनको लागि परिवर्तन गर्न सक्दछ। र उत्साह। ती शौकको रूपमा वा व्यापार उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, पुतलीहरू वयस्क खेलौना मात्र हुन्। यो उद्देश्य तपाईं सेक्स पुल वा यौन खेलौना सामग्री, विकल्प बाट प्राप्त गर्न को लागी निर्भर गर्दछ, र उपस्थिति नबिर्सनुहोस्। आफैलाई प्रेम गर्नुहोस् जीवनभर रोमान्सको सुरुवात हो। धेरै व्यक्तिहरु लाई जीवन भर अरुहरु को लागी लडाई छ। दु: ख र आनन्द, जस्तै पानी पिउने, कसरी तातो र चिसो थाहा छ। आफैलाई बाँच्ने मौका दिनुहोस्! पुतलीहरू खरीद गर्दै, तपाईं राम्ररी बाँच्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको लागि, अनुभव कुञ्जी हो, र पुतलीको यौन ज्ञानले तपाईंलाई दिनहुँ बढी भीख माग्नेछ! संतुष्टि भनेको पुतलीको बीचको नाम हो। उनको शरीरमा राम्रो नजर राख्नुहोस् र मलाई तपाई के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस्। पुतलीले धेरै पुरुष र महिला र धेरै जोडीहरूलाई धेरै लाभ पुग्न सक्छ। धेरै महिलाले फोटोग्राफी, सजावट वा स्टाइलिंगका लागि पुतली किन्दछन्। केही ग्राहकहरु का पार्टनरहरु छन्, तर तिनीहरु अन्य दुई भागहरुमा चोट नपुगी कल्पनिक प्रयास गर्न सेक्स पुत्री पनि प्रयोग गर्छन्। महिलालाई बढी सुन्दर र आकर्षक, र अधिक आध्यात्मिक रूपमा मनमोहक बनाउने orgasms को अलावा, अक्सर orgasm का आनंद उठाउने महिलाले यौन हार्मोन प्रणालीमा मात्र सन्तुलन राख्न सक्दैन, तर उनीहरूको प्रतिरक्षा पनि बलियो बनाउन सक्छ। स्तन र गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सरको जोखिम पनि धेरै सानो भयो। यी क्षणहरूमा, व्यक्ति अब निराश, अब डर, उनीहरूको भित्री आवाज सुन्नुहोस्, आफैं हुनुहोस्, सम्झौता नगर्नुहोस्, सबै चिन्तालाई बाहिरी दुनियालाई दूर गर्नुहोस्, र आफु बारे सबै शंकाहरूबाट मुक्त हुनुहोस्।
यसले अझै पनि सेक्स डलहरूमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ
कामोत्तेजक प्रवृत्ति, कामोत्तेजकता वास्तवमा पटरीबाट उत्रनुको कारण हुन सक्छ। तर यसबाट हुने बेवफाई मूलतः वफादार आत्मीयतामा देखा पर्दैन। जब दुई व्यक्तिहरू तिनीहरूको सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्छन्, कट्टरपन्थी फेटिशिज्म असम्भव छ, र फ्ल्याट चेस्टेड सेक्स डलको प्रयोग ...
तपाईंले आफ्नो सेक्स डलको लागि महँगो गहना किन्न आवश्यक छैन
बजारमा धेरैजसो सेक्स डलहरू सानो साइजको लुगा लगाउनका लागि उपयुक्त हुन्छन्, त्यसैले धेरै ठूला किन्न हुँदैन। अंडरवियर, सेक्सी वेशभूषा, भूमिका खेल्ने, लाखौं विकल्पहरू! कुनै पनि कपडा पसल राम्रो छ, वा यदि तपाईं यसको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले केही सुन्दर सजावट पसलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई सबै प्रकारका ...
मेरी श्रीमतीको सेक्स डल पार्टनर धनी र सुन्दर छ
बेवफाई आफै आलोचना हुनेछ, विशेष गरी स्क्वायर नर्तक जो गर्न केहि छैन। तर दुर्घटनाको कारण सबैलाई थाहा हुँदा सहानुभूति पाउनुहुन्छ ? प्रत्येक व्यक्तिको पटरीबाट खसेको कारणहरू व्यापक रूपमा भिन्न हुन सक्छन्, र फ्ल्याट छातीको यौन पुतलीले अन्य व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ...
$ 1,256.23$ 1,256.23
१148 सीएम लाइफ-साइज बोनी टीपीई सेक्सट डॉल
बुद्धिमान यौन गुड़िया संचालन निर्देशन
वयस्क मात्र (१++)
यस वेबसाइटले वयस्क सामग्री समावेश गर्दछ र ती १ 18 बर्ष वा माथिका लाई मात्र उपयुक्त छ। यदि तपाई कम्तिमा १ 18 बर्षको हुनुहुन्छ भने मात्र इन्टर क्लिक गर्नुहोस्।